Xisbiga WADDANI oo Shir Waddatashi ah Ka Yeeshay Mawqifka ay ka Qaadanayaa Saldhiga Milatari oo La Sheegay in Imaaraadka Laga Siinaayo Berbera – WARSOOR
Hargeysa – (warsoor) – Xisbiga WADDANI ayaa maanta shir waddatashi ah ka yeeshay saldhig milatari oo la doonayo in dawladda Imaaraardka Carabta laga siiyo magaaladda Berbera. Xisbiga ayaa go’aansaday in uu arintan ka soo saaro mawqif cad oo ay ka taagan yihiin qorshaha xukuumadda ee ku saabsan saldhigan.
Shirkan oo uu shir gudoominaayey wasiirkii hore ee Cadaaladda Somaliland Md. Xuseen Axmed Caydiid, waxanu sheegay in shirkan ay xubnaha xisbigu ay kaga doondayeen in dawladda imaaraadku saldhiga laga siiyo magaalo xeebeedka Berbera iyo In kale. Xuseen ayaa sheegay in go’aankii meel fiican u marayao marka ay soo dhamaystiraan hogaanka xisbgiga u gudbin doonaan go’aan cadna ka soo saari doonaan mawqifka ay ka taagan yihiin saldhigan.
Halkan ka daawo warkan oo aanu ka soo xiganay Channelka Faysla Fifa: